वर खोज्दै भिसा गर्ल – shubhabihani
Home / मनोरंजन / वर खोज्दै भिसा गर्ल
Posted by: admin in मनोरंजन October 21, 2016	Comments 940 Views
कार्तिक ५, २०७३-
उमेर भन्न नमिल्ने, उचाइँ ५ फिट ८ इञ्च, शिक्षा म्यानेज्मेन्टमा स्नातकोत्तर, हालको बसाइ अमेरिकाको न्युयोर्क, जन्मस्थान भद्रपुर, झापा माम्पी घोषको बायोडाटाबाट अहिलेलाई यत्ति मात्र साभार गर्न मिल्छ, किनभने उमेर, तलब आदि नसोध्नु रे ।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट विगतमा प्रसारण भएको ‘द पवनकली शो’ की दोस्री पवनकली हुन्— माम्पी घोष । बंगाली परिवारकी माम्पी अब बल्ल विवाहको मुडमा छिन् । दसैंका बेला देश फर्किएकी अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर माम्पीले दसैंभरि नेपालमा आफू सुहाउँदो वर खोजिन् ।
माम्पीले आफूभन्दा अलिकति अग्लो, पढाइ सकेसम्म आफूजति नभए व्यवसायी भए पनि हुने, सकेसम्म आफूले राम्रो कमाउने वरको खोजी गर्न थालेको एक वर्ष भैसकेको छ । ‘भनेजस्तो केटा पाउन गाह्रो रहेछ ।’ माम्पीले अनौपचारिक हुँदै भनिन् । कोही छन् त सिंगल माम्पीसँग मिंगल हुन चाहने ?
Previous: केपी वली को सपना साकार हुदै पाइपलाइनबाटै ग्यास बल्यो ! अब सिलिण्डरको के काम ? (भिडियोसहित) इमाडोलमा उद्योगमन्त्रीले यसरी गरे उदघाटन फोटो फिचर
Next: ओलीको जालमा प्रचण्ड, देउवाको मौनता कार्की हटाउने कि राख्ने ?